Dhawunirodha: Iyo Yakajeka & Yakazara Nongedzo Kune Akaunti-Yakavakirwa Chiitiko (ABX)
Chitatu, June 2, 2021 Chitatu, June 2, 2021 Douglas Karr
Demandbase iri kushandura nzira iyo makambani eB2B anoenda-kumusika. Demandbase Imwe ndiyo yakazara zvakakwana B2B kuenda-kumusika mhinduro, kubatanidza inotungamira account-yakavakirwa ruzivo, kushambadzira, ungwaru hwekutengesa, uye B2B dhata mhinduro kuitira kuti Kushambadzira uye Kutengesa zvikwata kumakambani makuru uye anokurumidza kukura anogona kubatana nekukurumidza, kugoverana njere, uye kuona kukura kukuru. Chief Marketing Officer, Jon Miller, akanyora uye akaburitsa iri rakanaka ebook idzva nezve shanduko yeAccount-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM)… Akaunti-Yakavakirwa Chiitiko (ABX). Chii
Demandbase + Sanganisa: Ziva Sarudzo-Vagadziri muTarget Maakaunzi
Wednesday, April 27, 2016 Chishanu, April 29, 2016 Douglas Karr
Isu tinoramba tichinyora nezve mabhenefiti eAccount-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM). Kana iwe usinganzwisise kuti chii ABM, isu takatsanangura ABM muzvinyorwa zvakapfuura pamwe nematanho anodikanwa ekushandisa rakabudirira zano reABM. Pachine zvinetswa nekuitwa kweABM, zvakadaro. Ipo 97% yevatengesi veB2B vakataura kuti parizvino vari kumhanya kana kuronga chirongwa cheABM uye 60% yevatengesi vanoshandisa ABM kushandura maakaunzi maakaunzi kuenda kumatungamiriri kana mikana, iyo
Chii chinonzi Akaunti-Yakavakirwa B2B Kushambadzira?
Chipiri, Mbudzi 4, 2014 Chipiri, August 1, 2017 Douglas Karr
Boka rako rekutengesa rinonzwa sei chaizvo pamusoro pekutengesa kwako? Chero nguva apo vatengesi veB2B pavanobvunzwa iwo mubvunzo, mhinduro dzinowanikwa kwese Vatengesi vanonzwa kunge vari kukotama neshure kuti vaendese hombe vhoriyamu yemutungamiri, uye Kutengesa zviri pachena hakusi kunzwa rudo. Shanduko inoenda chimwe chinhu seichi. Kushambadzira: Isu takaendesa 1,238 Kushambadzira Inotungamira Inotungamira (MQLs) mukota ino, 27% pamusoro pechinangwa chedu! Kutengesa: Isu hatisi kungowana rutsigiro rwatinoda. Kana izvozvo zvinonzwika
Nongedzo yeKutungamira Akaunti Kushambadzira
China, November 7, 2013 China, November 7, 2013 Douglas Karr
Iwo iwo maonero ekuti Demandbase akaisa pamwechete iyi infographic, achifananidza yechinyakare B2B kushambadzira kunongedza kushambadzira account inonakidza. Nepo kushambadzira kwakawanda kuchishanda kuendesa vanhu chaivo kune yako saiti, kuchine chimiro chiripo kune wako akakodzera mutengi chinofanirwa kuteedzerwa. Kuziva vanhu vanosvika pane yako saiti uye kuwana iyo solidagraphic (bhizinesi hunhu) dhata pane yavo indasitiri, zera, mari, nhamba yevashandi, nezvimwe zvinogona kukubatsira iwe kuisa pamberi yako